Antonio Conte oo Rikoor ka sameeyay Horyalka Iniriiska, Mourinho iyo Guardiola ayaa kaga horeeyay.
Wednesday, January 23rd, 2019 - 21:32:11
Sunday April 29, 2018 - 01:29:06 in Wararka by
Chelsea ayaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Swansea City oo 1-0 kaga baxsatay ciyaartii ka dhacday garoonka Swansea, Guushaas ayaana Blues kaga dhigan in ay Laba dhibcood usoo jirsadaan kaalinta 4aad.
Maamulaha Chelsea Antonio Conte ayaa guushaas kaga dhingeeyd in uu Rikoor cajiib ah ka sameeyo Horyalka Ingiriiska, isagoo si dhaqsi ah ku gaaray guushii 50aad Muddada kooban ee Galbeedka London uu joogo.
Conte ayaa gaaray guushiisii 50-aad 73 kulan oo uu hogaamiyay horyaalka premier League waxana kaliya ka badan Jose Mourinho oo 50 guulood ku gaaray 63 kulan iyo Guardiola oo ku gaaray 69 kulan.
Blues ayaa dib u soo noolaysay rajadeeda u soo bixitaanka tartanka champions League xilli ciyaareedka dambe iyaga oo haatan 2 dhibcood oo kaliya ka dambeeya kooxda kaalinta 4-aad sidoo kale 6 dhibcood ka dambaysa kaalinta 3-aad.